Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » I-United Airlines ithenge iijets ezili-15 ezivela kwiBoom Supersonic
Phantsi kwemiqathango yesivumelwano, I-United Airlines iya kuthenga iinqwelo-moya ze-Boom's 'Overture' ezili-15, nje ukuba i-Overture ihlangabezane neemfuno ezimanyumnyezi zokhuseleko, ezokusebenza nezokuzinza, kunye nenqwelomoya eyongezelelweyo.
UManyano longeza isantya esiphezulu ngesivumelwano esitsha
I-United yinkampani yokuqala yenqwelomoya yaseMelika ukusayina isivumelwano sentengiso neBoom Supersonic
Inqwelomoya entsha iya kunciphisa amaxesha okuhamba ngesiqingatha kwaye isebenze ukuya kuthi ga kwi-100% yamafutha endalo azinzileyo
I-United Airlines namhlanje ibhengeze isivumelwano sentengiso kunye nenkampani yeenqwelo moya esekwe eDenver UBoom Supersonic ukongeza inqwelo moya kwizithuthi zayo zehlabathi kunye necebo lokuzinza ngokubambisana - intshukumo encedisa ukutsiba ukuya phambili ekubuyiseleni isantya esiphezulu somoya.
Phantsi kwemvumelwano yesivumelwano, United Airlines Siza kuthenga iinqwelo-moya ze-Boom's 'Overture' ezili-15, nje ukuba i-Overture ihlangabezane neemfuno ezifunwayo zokhuseleko, ukusebenza kunye nokuzinza, kunye nenketho yenqwelo-moya eyongezelelweyo engama-35. Iinkampani ziya kusebenza kunye ekuhlangabezeni ezo mfuno ngaphambi kokuziswa. Nje ukuba isebenze, i-Overture kulindeleke ukuba ibeyinqwelomoya yokuqala enkulu ukuba ibe yi-zero-zero ikhabhoni ukusukela ngosuku lokuqala, elungiselelwe ukuqhuba kwi-100% yezibaso ezizinzileyo zokuhamba ngenqwelomoya (SAF). Kulindeleke ukuba ikhutshwe ngo-2025, ibhabhe ngo-2026 kwaye kulindeleke ukuba ithwale abakhweli ngo-2029. I-United neBoom nazo ziya kusebenza kunye ukukhawulezisa ukuveliswa kwezinto zeSAF.
“I-United iyaqhubeka nohambo lwayo lokwakha inqwelo moya entsha, ezinzileyo kunye nenkqubela phambili yanamhlanje kwitekhnoloji eyenza ukuba kube lula ukubandakanya iinqwelomoya. Umbono kaBoom ngekamva lokuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya, kudityaniswe nendlela yothungelwano olomeleleyo lomzi mveliso kwihlabathi, izakunika abahambi beshishini kunye nolonwabo ukufikelela kumava eenqwelomoya, "utshilo umphathi we-United uScott Kirby. "Injongo yethu ibisoloko ingokudibanisa abantu kwaye ngoku sisebenza noBoom, siya kuba nakho ukuyenza ngomkhamo omkhulu ngakumbi."
Iyakwazi ukubhabha ngesantya seMak 1.7 -siphindwe kabini isantya seenqwelo moya zanamhlanje ezikhawulezayo- I-Overture inokudibanisa ngaphezulu kweendawo ezingaphezulu kwama-500 phantse kwisiqingatha sexesha. Phakathi kweendlela ezininzi ezinokubakho ze-United yiNewark ukuya eLondon kwiiyure nje ezintathu ezinesiqingatha, iNewark ukuya eFrankfurt ngeeyure ezine kunye neSan Francisco ukuya eTokyo kwiiyure nje ezintandathu. Ukuvezwa kuya kuyilwa kunye nezinto ezinje ngezihlalo zokuzonwabisa ezihleli esihlalweni, indawo eyaneleyo yobuqu, kunye netekhnoloji yokunxibelelana. Ukusebenza noBoom lelinye icandelo lesicwangciso-qhinga se-United sokutyala imali kubuchwepheshe obutsha obuza kwakha ikamva elizinzileyo lokuhamba ngomoya.
"Isivumelwano sokuqala sokuthengwa kweenqwelomoya ze-zero-zero sibonisa inyathelo elibalulekileyo kwinjongo yethu yokwenza umhlaba ofikeleleke ngakumbi," utshilo uBlake Scholl, umseki kunye ne-CEO ye-Boom Supersonic. “UManyano kunye neBoom babelana ngeenjongo ezifanayo —umanyano lwehlabathi ngokukhuselekileyo nangokuzinzileyo. Isantya esiphindwe kabini, abakhweli base-United baya kufumana onke amancedo obomi ahlala emntwini, ukusuka kubudlelwane obunzulu, obunemveliso ngakumbi kwezoshishino ukuya kwixesha elide, iiholide zokuphumla ngakumbi ukuya kwiindawo ezikude. ”
Isikhululo senqwelomoya saseBudapest: Bhabha usuka eBudapest usiya kwisiqithi saseGrisi saseKos ngeWizz Air